अटो विशेष « News of Nepal
दीपेन्द्र थापा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म विदेशबाट कुल ४६ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरका सवारी साधन र सवारीका पार्टपुर्जा आयात भएको छन्। चालू आवको ६ महिनामा ६ अर्ब ५०
सन्तुलित विकासका लागि सवारी विकेन्द्रीकरण
डा. टोकराज पाण्डे प्रवक्ता, यातायात व्यवस्था विभाग पछिल्लो समयमा पूर्वाधार विकास हुँदै गएको छ, सडक पनि त्यही अनुपातमा बढेका छन्। सडक चिल्लो भएसँगै चिल्लो सडक देखेपछि मानिसमा चिल्लो सवारी किन्ने
आफ्नै हातमा सवारीको सुरक्षा
हेमन्त जोशी नेपालको पूर्वाधार विकास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। सडकलाई त झन् पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ। सडक पूर्वाधारको विकाससँगै अटोमोबाइल क्षेत्रको पनि बजार विस्तार हुँदै गएको छ। नेपालमा कुल
सवारी साधनको संख्या बढे पनि सडकको स्तरोन्नति हुन सकेन
विगतको तुलनामा अटोमोबाइल बजारको विकास उल्लेख्यरूपमा भइरहेको छ। तथ्यांकमा हेर्दा कुल जनसंख्याको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत नेपालीसँग चार पांग्रे सवारी साधन छन्। यसको प्रमुख कारण तीव्र शहरीकरण, सडक पूर्वाधार विकास
१७ लाख जनालाई रोजगारी दिने अटो मोबाइल क्षेत्र उत्पादक कि अनुत्पादक ?
राजु श्रेष्ठ किङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएसँगै उत्पादक क्षेत्र कि अनुत्पादक क्षेत्रको परिभाषालाई लिएर अहिले सरोकारवालाबीच बहस हुँदै आएको छ । विशेष गरी अटो मोबाइल क्षेत्रलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रले अनुत्पादक